म कलाकार भएँ भनेर बुवाको गु,नासो थियो । मृ’त्यु हुने दिन म सँग नबोली जानु भयो मैले कैले खुशी दिनै सकिन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 1, 2021 AdminLeaveaComment on म कलाकार भएँ भनेर बुवाको गु,नासो थियो । मृ’त्यु हुने दिन म सँग नबोली जानु भयो मैले कैले खुशी दिनै सकिन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
बांकी भिडियोमा हेरौ: